China Tungsten Carbide ekisero Sleeve Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Tungsten carbide axle sleeve inoratidza kuomarara kwakakura uye simba rekutsemuka rekutsemuka, uye ine kuita kwakanyanya pakurwisa abrasion uye ngura, iyo inoita kuti igone kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji.
Tungsten carbide axle sleeve inozivikanwa zvakanyanya nekusimba uye mhando. Inogona kumira yakanyanya kumanikidza uye inoshingirira ngura, saka inoshandiswa mumapombi emvura, mapombi emafuta uye mamwe mapombi. Tungsten Carbide axle Sleeve anowanzo shandiswa mumapombi emvura, mapampu emafuta uye mamwe mapombi, anonyanya kushandiswa pakudzvinyirira kana pombi yekumisa ngura, kuyerera kudzora.T Mazuva ano, tungsten carbide axle sleeve anga achitamba yakakosha chikamu mumunda weakareba anoshanda zvikamu zvinhu.
Iyo tungsten carbide axle sleeve ichashandiswa zvakanyanya kutenderera rutsigiro, kuenzanisa, anti-kukanda uye chisimbiso che ekisero yemota, centrifuge, mudziviriri uye mupepeti wepombi yemvura yakanyura mune yakashata mashandiro ezvinhu eakanyanya kumhanya anotenderera, jecha kupwanya abrasion uye gasi ngura mumunda wemafuta, senge masiraidhi anotakura ruoko, mota ekisero ruoko uye chisimbiso ekisero sleeve.
Tungsten carbide axle sleeve inogona kuisa kana kuchengetedza shaft pane iyo inotenderera shaft kudzivirira shaft kupfeka. Zvichakadaro, kuomarara kwekukuya shaft kwakaderera. Iyo shaft isina kudzima uye tempering kurapwa inogona kushandiswa, nekudaro kudzikisira kugadzirisa kunetseka kwezvikamu zvinoenderana Yedu ekisero maoko ane zvakanakira kusimba kusakara kusagadzikana, diki kukweshera coefficient, kwakanaka kuomarara uye hurefu hupenyu hwehupenyu.
Pashure: Tungsten Carbide Inotungamira Bush
Zvadaro: Tsika Carbide Bush uye Sleeve